Bipasha Basu Dhibka Kusoo Fool Leh Sidee U Xalin Kartaa Madaama Laga Dal Baday Inay 25,000 pounds Magdhow U Bixiso - Hablaha Media Network
Bipasha Basu Dhibka Kusoo Fool Leh Sidee U Xalin Kartaa Madaama Laga Dal Baday Inay 25,000 pounds Magdhow U Bixiso
HMN:- Dhawaan atirishada Bipasha Basu ayadoo careesan ayay magaalada London isaga soo laabatay waxayna ku tilmaantay kuwo aan lala shaqeyn qarin oo aqlaaq daran koox ay Fashion u sameyn laheyd!
Hadaba kooxdii Fashion-ka UK lagu qaban lahaa diyaariyeen Gurbani Kaur & Ronita Sharma Rekhi sidoo kalena Bipasha Basu markii hore heshiis lasoo galeen waxay haatan dal badeen magdhow.
Gurbani Kaur & Ronita Sharma Rekhi waxay si rasmi ah qoraal ay soo saareen ku sheegeen inay Bipasha Basu bixiso 25,000 pounds (20 Lakh) hadii kale sharciga ay la tiigsan doonaan.
Waxaa la siiyay Bipasha Basu mudo 7-maalmood ah inay arinkaan kaga soo jawaab celiso kuna bixiso lacagaha mag dhow ahaan looga rabo.
Waayo xidigtaan ayadoo careesan ayay London kasoo laabatay mana aysan ka qayb galin Fashion-kii loo diyaariyay ayadoo ku andacootay inaysan soo dhaweyn fiican la kulmin oo xitaa Hotel-kii ay dagtay lacagaha iyada iska bixisay!
Hadaba qoraalka rasmiga ah oo ay soo saareen kooxda qaban qaabiyeen Fashion-ka haatana Bipasha mag dhow xoogan kaga dal badeen waa mid hadal heyn xoogan abuuray waxaana la sugi doonaa jawaabta ay Bipasha bixin doonto.